5 unique နွေရာသီနေ့စွဲအကြံဉာဏ်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 21 2019 |2မိဖတ်ပြီးသား
နွေရာသီပြန်ကန်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်ရောနှောမိသားစုနှင့်အတူအချိန်မွေ့လျော်သောကြောင့်စုံလင်အချိန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာတချို့ပျော်စရာမွေ့လျော်ဖို့လည်းရရန်ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်င်, မသင့် Run-Of-The-ကြိတ်စက်ရက်စွဲများ. အပူချိန်မြင့်မားကျဆင်းခဲ့ရပြီကြာကြီးမြတ်အမှတ်တရများထဲသို့လည်းညှိုးနွမ်းဖို့သေချာဖြစ်ကြောင်းငါးပါးထူးခြားတဲ့နွေရာသီရက်စွဲအတွေးအခေါ်များကိုစစ်ဆေး.
Adventures ကို Canoeing: မြစ်တမြစ်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောရေအိုင်တစ်နေရာရာမှာမောင်းနှင်မှုအကွာအဝေးအတွင်းရှိမယ့်ဆိုရင်, ကနူးလှေရာပူဇော်သက္ကာကိုအစက်အပြောက်များလည်းမယ့်အခွင့်အလမ်းတော်တော်ကောင်းရှိမယ့် (သို့မဟုတ် kayak) ငှားရမ်းခ. အဲဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများဟာနွေရာသီလအတွင်းသာပွင့်လျက်ရှိ, ဒါကြောင့်သင်သာရရှိနိုင်သည့်လှေအားလုံးရှိပြီးသားနေ့အဘို့ကိုထုတ် check လုပ်ထားရှာဖို့တည်နေရာမှရောက်ရှိလာသော၏စိတ်ပျက်မိကြောင်းနှင့်အတူဆင်းကြကုန်အံ့မည်မဟုတ်ကြောင်းကြိုတင်ဝေးလုံလောက်သင့်စွန့်စားမှုစာအုပ်ဆိုင်သေချာပါစေ. မကြာခဏ Groupon တူဆိုဒ်များကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောငှားရမ်းခအဘို့အအပေးအယူရှိသည်, ဒါကြောင့်အဲဒီကမ်းလှမ်းချက်များကိုတဦးတည်း၏အသုံးချနေမှတဆင့်ပိုက်ဆံချွေတာစတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်နိုင်. သင်နှင့်သင့်ရဲ့စွန့်စားမှုစဉ်အတွင်းတိုက်ကျွေးသင့်ရက်စွဲနှစ်ခုလုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရေစိုခံကွန်တိန်နာထဲမှာပျော်ပွဲစားနေ့လယ်စာထုပ်ပိုး.
Frisbee သို့မဟုတ် Mini ကိုဂေါက်စိန်ခေါ်မှုများ: နွေရာသီလများအတွင်းမှောင်မိုက်ဘိုးလင်းလမ်းကြား Skip အစားအဲဒီပျော်စရာ Golf ရွေးချယ်စရာတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါ. mini ကိုဂေါက်သီးသူ / သူမ၏အားကစားစွမ်းရည်မသေချာသေးမည်သူမဆိုအတွက် "ဘေးကင်းလုံခြုံ" ရွေးချယ်မှုဖြစ်လေ့ရှိတယ်နေစဉ်, သာ. အားကစားသမားနာမယူဘဲနေတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုယူဒေသခံတစ်ဦး Frisbee ဂေါက်ကွင်းထွက်စစ်ဆေးချင်စေခြင်းငှါ,. ဤလှုပ်ရှားမှုများကိုနှစ်ဦးစလုံးပင်လယ်အော်မှာအဆင်မပြေငြိမ်ဝပ်စွာနေသိမ်းထားပြီးပြည့်စုံသောမသာ, သင်သည်ထိုသူတို့သည်စုံလင်ပစ် / တင်ထားတဲ့ပုံစံထုတ်သည့်ကိန်းဂဏန်းကိုကူညီသကဲ့သို့ထိုသူတို့သည်စသင့်ယနေ့အထိအနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာရရန်အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းများင်. ပုံမှန်အားဖြင့်သာပွင့်လင်းနွေရာသီကာလအတွင်းဒေသခံတစ်ဦးဆီးနှင်း Cone shack-အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုခရီးစဉ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ရက်စွဲကိုချွတ်ပြီးစီးခြင်း.
ခွေးကို Park ကနေ့ရက်များ: သင်နှင့်သင့်ရက်စွဲနှစ်ခုလုံး avid ခွေးချစ်သူတွေဖြစ်ကြလျှင်, သင်ပျော်စရာ၏ညနေခင်းထွက်ဦးအဖြစ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာခွေးတစ်ကောင်ကိုအပေါင်းအဖော်ထားခဲ့ဖို့မလိုပါင်. သူတို့ကိုဆောင်းတွင်းလအတွင်းပိတ်သိမ်းခံရဖို့တွေအတွက်မထူးဆန်းပေမယ်, အများစုဒေသခံခွေးကိုပန်းခြံများတို့သည်နွေရာသီကာလအတွင်းပွင့်လျက်ရှိ. ဖြစ်နိုင်လျှင်, အွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နဲ့သူတို့ကိုသင့်ရဲ့ခွေးနဲ့ရက်စွဲကိုဆောင်ခဲ့မီအထူးသဖြင့်ခွေးကိုပန်းခြံများအတွက်တိကျသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမဆိုတွေကသုတေသနလုပ်ဖို့မသေချာပါစေ. အဘယ်သူမျှမခွေးကိုပန်းခြံများသင့်ဧရိယာတွင်ပွင့်လင်းစေခြင်းငှါထင်လျှင်, သင့်ရဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အခြားတစ်ဦးကိုခွေး-လမ်းလျှောက်ရက်စွဲအချိန်စာရင်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်လည်းအစားပျော်စရာအခြားရွေးချယ်စရာ Option ကိုဖြစ်နိုင်. သင်ရက်စွဲစဉ်အတွင်းအငြိမ့်အေးဓါတ်ကိုပြန်လည်လူတိုင်းစောင့်စေခြင်းငှါအပိုရေတလျှောက်ကိုရောက်စေခြင်းငှါသတိပြုကြလော့.
လဟာပြင် Theater Evening: ပူနွေးသောညဦးယံ၌အားသာချက်ကို ယူ. သင့်ဒေသခံအနုပညာမြင်ကွင်းအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပိုလေ့လာ. မြို့များစွာပြင်ပတွင်ပြဇာတ်ရုံဖြစ်ရပ်များလက်မှတ်တွေအခမဲ့သို့မဟုတ်လျှော့ချစျေးနှုန်းတွေကိုဆက်ကပ်, ဖျော်ဖြေပွဲဖျော်ဖြေပွဲ choir တေးဂီတမှ Shakespearean ပြဇာတ်အထိနှင့်အတူ. ဒေသခံအချည်အနှောင်လည်းမကြာခဏအဖြစ်ကောင်းစွာနွေရာသီလအတွင်းအမျိုးမျိုးသောပြင်ပနေရာဒေသမှာပြဖျော်ဖြေကြသည်. အဘယ်သူမျှမအောက်ဒိုးအနုပညာဖျော်ဖြေ options များသင့်ဒေသအတွင်းရရှိနိုင်မှထင်လျှင်, မည်သည့် drive ကို-in-ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့မည့်အစားသို့ရှာဖွေနေစဉ်းစား; တိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်နီးပါးတူညီမဟုတ်ပေမယ့်, ကားမောင်း-in-ရုပ်ရှင်ရုံနေဆဲသူတို့အားအချို့ timeless အရည်အသွေးပြည့်ရှိသည်.
Geocaching: ဒီနည်းပညာပိုင်းနွေရာသီလတစ်ခုတည်းကိုသာကန့်သတ်သည့်အလုပ်မဟုတ်ပါနေစဉ်, ပိုကောင်းရာသီဥတုပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းအမှန်ပင် geocaching ရက်စွဲစဉ်အတွင်းပျော်စရာရှိခြင်းသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်. မိတ်ဆွေတစ်ဦးထံမှ system ကိုသြဒိနိတ်ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ရှာဖွေရေး၌သင်ရရှိရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသင့်ရဲ့ smartphone ကိုသုံးတဲ့ GPS စနစ် Borrow, နှင့်သင်၏နေ့ရက်တွင်စတင်ဖွင့်ထုတ်မီဒေသခံ geocaches တွေကသုတေသနလုပ်ဖို့မ. စသင်နှင့် cache ထဲတွင်ထားခဲ့ဖို့သင့်ရဲ့ရက်စွဲတစ်ခုပျော်စရာကို item တလျှောက်ကိုရောက်စေဖို့သေချာပါစေ!
ခွေးများအပေါ် Katz : ခွေးများနှင့်အတူသင်တန်းများနှင့်အသက်ရှင်ဖို့အအသိဉာဏ် Guide ကို
6 ရက်စွဲရေကန်၌ဗတ္တိဇံကိုခံရခင်သင့်ကိုယ်သင်မေးကြည့်ပါရန် Key ကိုမေးခွန်းများ